Apple na-aga n'ihu ịgbanye ebe nchekwa na nhazi ya na MacBook Pro 2017 | Esi m mac
Enwere ihe ndị na-anaghị agbanwe agbanwe, ọbụlagodi n'oge ndị a. Ruo oge ụfọdụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere Apple, na-ahọrọ iji belata ohere nke ngwaọrụ mkpanaka ha dị ka o kwere mee, ma ọ bụrụ na ha bụ smartphones, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba, na-agbaso ọchịchọ ahịa nke ndị ọrụ na-ekwupụtaghị n'oge ọ bụla mana Ọ na-enweghị na-ekwu. Iji gbalịa ime ka ngwa ngwa nke ngwaọrụ ndị a kawanye mma, ndị na-emepụta nnukwu ihe na-ahọrọ iji gluu ma ọ bụ ire ere n'ọtụtụ ngwaahịa ha, ka ọ bụghị naanị belata ohere kamakwa iji gbochie ha imelite erughị eru, n'ihe gbasara laptọọpụ.
Ihe ohuru MacBook Pro 2017, dika iFixit kwadoro mgbe o gbasasiri ya, bu uzo nke iri na abuo nke ulo oru nke ruru ahia n'enweghi mmeba mgbe anyi zutara ya. Nke a bụụrụ onye ọrụ nsogbu na ị gaghị agbasa na nke gị ozugbo ị zụtara ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ọnụahịa dị elu nke Apple na-enye anyị na nhazi dị iche iche mgbe ịzụrụ ya.
Mana ọ bụghị naanị nsogbu, ebe ọ bụ na mgbe ọ na-arụzi ya, ụgwọ nrụzi ahụ nwere ike ịpụ na igbe ahụ, ma maka Apple ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ dị n'okpuru ikike na onye ọrụ njedebe, ọ bụrụ na akwụkwọ ikike ahụ agwụla, nke na-amanye nnukwu akụkụ n'ime ha ka ha tinye atụmatụ Apple Care Ọ bụrụ na ịchọghị ịtụ ụjọ na nke a. O doro anya na Apple chọrọ ka anyị tinye Apple Care ma ọ bụrụ na ọ bụ na ụdị ngwaọrụ a ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịtụ ụjọ.
Mana nke a abụghị mgbe niile, ebe ọ bụ na onye ibe m Jordi kwuru, ọhụrụ iMac 4K, nke gaferekwa n'aka nke iFixit, a naghị agbanye nhazi ahụ ma ọ bụ RAM ebe nchekwa na bọọdụ, nke ga - eme ka ndị ọrụ nweta nkwalite RAM na - enweghị Apple ma si otú a chekwaa ego. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na enwere nsogbu na nhazi ahụ, ọnụahịa nke nrụzi agaghị adị elu dị ka MacBook Pro, ebe, dịka m gwara gị, a na-ere ya na bọọdụ ahụ, nke na-eme ka nnọchi ya agaghị ekwe omume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Apple na-aga n'ihu ịgbanye ebe nchekwa na nhazi ya na MacBook Pro 2017
Otu esi emepụta ụzọ mkpirisi (utu aha) na Mac